Duqa magaalada Aydın wuxuu taageerayaa Mashruuca Tüdemsaş | RayHaber | raillynews
HomeGUUDDuqa Magaalada Aydın Taageeraya Mashruuca Tüdemsaş
Duqa Magaalada Aydın Taageeraya Mashruuca Tüdemsaş
26 / 06 / 2014 GUUD, Headline, TURKEY
Duqa magaalada Aydın wuxuu taageeraa mashruuca Tüdemsaş: Duqa magaalada Sami Aydın wuxuu booqashadii ku soo laabtay TSO. Kuxigeenka Badhasaabyada iyo Gudoomiyaha Barlamaanka Necati Şahin iyo Xubnaha Guddiga ayaa booqday booqashada. Inta lagu guda jiro booqashada, maalgashiga wadajirka ah ayaa la qiimeynayaa si loo kordhiyo maalgashiga Sivas iyo Tüdemsaş iyo 2. Waxaan isweydaarsanay aragtiyada ku saabsan OIZ. Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Sivas (TSO) Cusmaan Yildirim Gudoomiyaha warshadaha Tüdemsaş 2. Duqa magaalada Sami Aydın wuxuu taageeray tallaabada lagu wareejinayo warshad casri ah oo laga dhisayo OIZ. Duqa magaalada Aydın ayaa yidhi, "Haddii Tüdemsaş uusan hagaajin karin oo uusan dib u cusbooneysiinaynin mustaqbalkiisa, waxay geli doontaa isbeddel hoos u dhac oo way baabi'i doontaa. Talaabooyin waa in la qaadaa si ay isu wanaajiso tan ”.
HOOS KA DHACA DHAQAALAHA WAA IN AY KA QAADAN KARAA Suuqa
Cusmaan Waa maamulayaasha maxalliga ah ee magaaladaas horumariya, ayuu yiri Duqa Cusmaan Yıldırım. Wasiirka iyo taageerada siyaasadeed aad bey muhiim u yihiin, laakiin guuldaradu waa lama huraan haddii dawladaha hoose aysan isla noolaanin oo aysan si wada jir ah wax u qaban. Waxaan eegto gobollada horumaray ee Turkey ee gobolka kuwaas oo in duqa xoog leh. Ogaanshahan, waxaan la joognay dhamaan madaxweynayaashayada. Waxaan sii wadaynaa inaan taageerno. Haddii dhammaanteen aan ku noolaan doonno Sivas, qof walba waa inuu sameeyaa dadaal walba ”.
WAA IN AAN LAGU QAADANO
Yildirim wuxuu sheegay in magaaladu u baahan tahay farxad cusub oo ah bartilmaameedkeeda 2023 oo wuxuu yiri, büyük Waxaa jira tartan weyn oo aan ahayn kaliya u dhexeeya dalalka laakiin sidoo kale wuxuu u dhexeeya gobollada. 100 ee Jamhuuriyadda. Haddii aan dooneyno inaan marka hore u tagno oo aan gaarno himilooyinkeenna, waa inaan tallaabo qaadno. Natiijadii ka soo baxday ficilkii wada jirkeena ee hore, qodobbada aan raacnayna way guuleysteen. Waxaan u baahanahay inaan ku laabano shaqo farxad leh. ”Yıldırım wuxuu yidhi," Sivas waa magaalo tareen weyn waagii hore. Waxa jira bedel ka yimid sayidkii iyo horjoogaha. Illaa iyo hadda kama suurta gelin inaan sifiican uga faa'iideysan karno kartidan. Waxaa jira baahi weyn oo loo qabo tareennada adduunka. Gaar ahaan Yurub iyada oo ay ugu wacan tahay gabowga maraakiibta ayaa waxaa socda hawlo dayactir ah. Waxaan ubaahanahay inaan sameyno qiimeyn wanaagsan tan. Waxaan u baahanahay inaan u bandhigno maalgashadayaasha dhulkii ay doonaan. Waxay rabaan dhul ay marinnada tareenadu galaan warshadooda. Haddii aan awoodno inaan bixinno tas-hiilaadkan, warshadaha ku dari doona warshadda Tüdemsaş 3-5 ayaa la furi doonaa. ”
KU IMAANSHAHA XUDUUDAHA EE TUDEMSAS SI LAGU SAMEEYO KHILAAF
Demir Horumarinta magaalada iyo kobcinta Tüdemsaş, jidadka tareenadu waa inaysan ka tagin magaalada. Tüdemsaş sidoo kale annaga aad bey muhiim noogu tahay. Waxaan haysannaa dad rooti ka cunay warshaddan aqalkasta. Waxaan aragnaa in warshadda ay lumisay muhiimadeeda. Hadday sidaas ku dhacdo si fiican uma dhammaan doono. Taasi waa sababta aan ugu baahan nahay inaan ka qeyb galno. Dhulka warshada waa in loo qoondeyaa Degmadeena.
AYAA KA DHACAYA XAALAD CUSUB EE TUDEMSAS EE 2.OSB
Ka dib markii Tareenka Gobolka iyo TÜDEMSAŞ ay dhisaan xarun leh alaabo kala duwan iyo kartiyo kala duwan sida loo codsaday, shaqaalaha warshada waa in ay u dhaqaaqaan isla meeshaas oo ay la joogaan degmadeena. Hay'adaha dowladu hada waa si gaar ah. Tani waa kiiska adduunka. Xagee ka xayiraynaa? Waxaan aaminsanahay in haddii meeshan si gaar loo leeyahay, ay eegi doonaan warshadda sababta oo ah dhul qaali ah. Waxaan dhahnaa Sivas iyo warshadeena labadaba si loo badbaadiyo. Haddii sidoo kale kiro ay hesho dadka reer Sivas. Talada ha laga helo degmadayada. Waan ka xanaaqnay taas. Waxay yiraahdaan waxaad dooneysaa inaad xirto warshadda. Xiritaanka warshadda waa khiyaano qaran. Waxaan rabnaa in warshadda ay fiicnaato.
WAA IN AAD UGU HESHI KARTAA DHAQAALAHA
Duqa magaalada Sami Aydın wuxuu cadeeyay in TSO ay tahay mida magaalada, waxa uuna intaa raaciyay: “Rugtayada Ganacsiga iyo Warshadaha ayaa aad muhiim ugu ah dhaqaalaha iyo mustaqbalka Sivas. Waxaan danaynaynaa aragtida qolkayaga. Waxaan u maleynaynaa inay tahay inay fikrad ka bixiyaan mowduuc kasta oo ku saabsan Sivas. Horumarka Sivas wuxuu noqon karaa ilaa heer shaqada wanaagsan ee hay'adaha dowliga ah. Waxa muhiimka ah waa in la hubiyo horumarinta qaybta gaarka loo leeyahay ee Sivas. Dareenkan, waxaan u maleynaynaa in TSO ay tahay meesha ugu dhow ee loogu talagalay Sivas. Soo saaray in Sivas, Turkey, ama xataa haddii aynu leeyihiin brand xoog leh shirkadaha in gudbay hore ee dunida ugu tartamaan. Hawlaha naga horeeya, waxaan ubaahanahay inaan bilowno qaab cusub iyadoo aan la bilaabeyno Degmadeena, Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha oo hoos imaaneysa hogaamiyahayaga gudoomiyaheena si aan wadada u xaareyno maalgashiga Sivas.
2. MASHRUUC KU SAABSAN MADAXWEYNE OIZ
Gaar ahaan 2. Waxaan u baahan nahay inaan u soo bandhigno OIZ mashruuc mudnaan leh magaaladeena. Waxaan u baahanahay inaan u bandhigno maalgashadayaasha faa'iidooyinka kuwa kale aysan siin. Waxaan hiigsaneynaa inaan galno wadada tareenka ee xaafad walba. Marka aan taas loo gaaro, waxaan noqon doonaa tusaale lagu Turkey. Maraakiibta waxay haysaa meel muhiim ah. Sidaa darteed, maalgashadayaashu waxay doorbidi doonaan Sivas. Waxaan ku dadaali doonnaa horumarinta OIZ iyo kordhinta maalgashiga.
XAQIIQOOYINKA AYAA UU DHIISI KARA KA HOR, TUDEMSAS WAA LAGU SAMEYNAYAA
Haddii Tüdemsaş uusan horumarin karin isla markaana dib u cusbooneysiin karo mustaqbalka, wuxuu ku dhacayaa hoos u dhac hoose oo waalanaya. Talaabooyin waa in la qaadaa si ay isbadal ugu sameyso tan. Khayaali sax ah, qorshe sax ah iyo waqti sax ah. 2. Haddii aan qorsheyno oo aan dardargalinno OIZ sidii aan higsanaynay, way u fududaan doontaa TÜDEMSA inay dhisto dhismayaal cusub gobolkaas ka dibna halkaas uga guurto. Waxaan ubaahanahay inaan fursad siino hormarka horu mariya xaaladan.
Duqa magaalada Gumuscuogoglu ayaa mashruuca kor u qaadaya mashruuca buuraha Sis Mountain
Taageero laga helayo Izmir ilaa mashruuca Tramway ee Izmir ee Izmir
Young Musiad wuxuu taageeraa Mashruuca Pink Wagon ee Macaayadaha
Tudemsas si loo dayactiro gaadhiga ka yimaada Yurub
Madaxweyne Atilla ayaa codsaday taageero ka timaada Arslan si uu u qaato tareenka dhulka
Taageerada buuxda ee Madaxwaynaha MOSIAD ee Mucaaradka ah ee ku wareejinta Tuulada Adana
Taageerada Xisbiyada Mucaaradka ee Mashruuca Ropeway
Mashruuca Taageerada Dawlada ee Mashruuca Rail
Taageerada HAS ee loogu talagalay Mashruuca Khadka Gaadiidka-Gaaranka Gargaarka
Taageerida deriska ee mashruuca xadiidka shidaalka ee Shiinaha
Taageerada mashruuca line-tareenka xawaaraha sare ee Moscow-Kazan ee ka yimaada Shiinaha
Taageero loogu talagalay mashruuca ballaarinta mitrooga ee ka socda Midowga Yurub ilaa Warsaw
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Sivas
Hooska hoosta ee adeega
Ogeysiiska Qaadashada: Soo iibsiga Qiimaynta iyo Adeegyada Mashruuca ee dhismaha Iskuulada Baabuurta